Qorichi dhiibbaa dhiigaaf fudhatan yaadannoo jaalallee duraanii irraanfachuuf nama gargaaraa? - BBC News Afaan Oromoo
Qorichi dhiibbaa dhiigaaf fudhatan yaadannoo jaalallee duraanii irraanfachuuf nama gargaaraa?
Qorataan Monteeriyaal qalbii yeroo jaalalleen nama dhiisu cabdu dhinsuuf yaadannoo gulaaluufi mala bettaa bilookar jedhamu kan dhikkisa onnee ittiin wal'aanan argadheera jedha.
Dr Aleen Biraaneet dhimma dhipina sammuu balaa ykn rakkoo booda dhufu waggaa 15 qorateera. Kanas namoota waraanarra hirmaatanii turan, haleellaa shororkeessummaa keessa kan darabniifi yakki kan irratti raawwatame waliin taasise.
Qorannoon isaa baayyeen wal'aansa ''riikonsolideeshiin teeraappii'' jedhamu yoo tahu yaadannoo nu miidhe haquu dha.
Yaadni ijoo qorannoo kanaa qoricha dhiibbaa dhiigaafi dhukkubbii mataa yaaluuf gargaaran dhimma kanaaf fayyadamuu dha.
Wal'aansichi qoricha piroopiraanoolol jedhamu wal'aansi eegalamuun sa'aa tokko dura fudhachuun jalqaba. Kanaan booda dhukkubsataan dhibee isaa kan duraa tokko tokkoon akka barreessuufi sagalee guddisee akka dubbisu taasifama.
''Yeroo baayyee waan darbe yoo yaadannu, waanti barannu haaraan jira taanaan yaadannoon keenyi banamuun of haaromsa, achiin booda deebi'ee kuufama,'' jedha ogeessi xiinsammuu kun.
Adeemsi wal'aansa kanaa kutaa yaadannoo miirri guddaan jiru akka qaqqaabnuuf balbala nuu bana.
''Hubannoo guddaa waa'ee yaadannoon akkatti uumamu, banamu, haaromfamuufi kuufamu fayyadamna. Beekumsa kana akkaataa saayinsiin narvii sammuu namaa qoratu dhukkubsattoota yaaluuf fayyadamutti gargaaramne,'' jedhu Dr Biraaneet.
Wal'aansi hakiimni kuni kennan waan fiilmii 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' jedhamurra fudhatme- kan jaalalleewwan wal lolan yeroo yaadannoon isaan waliif qaban akka haqamu tahu agarsiisu fakkaata.
Hakiimichi garuu kuni yaadannoo balleessuu osoo hin taane yaadannoon akka nama hin miine gochuu dha jedhu.
Yaadannoon ykn yaadni namaa inni qulqulluufi sirriin kutaa sammuu hippookaampaas jedhamu keessatti kuufama. Miirri yaadannoo keenyaa garuu kutaa sammuu amyaagdaalaa jedhamu keessatti kuufama.
''Fakkeenyaa fiilmii karaa ammayyaawaaa hin taaneen waraabaa jirta haa jennu. Sagaleefi suuraan iddoo garaagraatti dha kan kuufaman.
Namoonni yeroo miidhama isaanii yaadatan miiraa fi yaadannoo keessa jiraatu. Qorichi piroopiraanoolol jedhamu garuu hulaa isa tokko irratti qofa xiyyeefata-isa kan miiraa jechuu dha.
Qoricha fayydamuun yaadni irra deebinee akka yaadannu godhame kutaa sammuu keenyaa miirri guddaan hin jirre akka kuufamu taha.
Akka qorannoon kun agarsiisutti dhukkubsattoonni harka 70 tahan wal'aansa yeroo gabaabaatiin itti fureera.
Dr Biraaneet qorattoota biroo waliin tahuuni dha hojii kana kan hojjetu, dhihootti immoo Firaans keessatti sagantaa wal'aansa namoota yeroo haleellaa shororkeessummaa Paariis fi Niis miidhaman wal'aanuu hakiimota 200 waliin tahuun jalqabeera.
Sagantaa kanaanis hanga yoonaa namoonni 400 tahan yaalii argataniiru.
Goodayyaa suuraa Piroopiraanoolool fayyadamuun wal'aansi Dr Aleen Biraaneet argatan yaadannoo keenya wal'aanuuf gargaara
Bu'aa yaalii kanaa erga argeen boodas hakiimichi wal'aansa kana babal'isuu nan barbaada jedha.
Dr Biraaneet barataasaa duraanii waliin tahuun yunivarsiitii Monteeriyaal keessatti xiyyeeffannoo isaa gara namoota jaalalaan miidhamanitti garagalcheera.
Namni gaafa nama ganu garaa ni gadda, jaalallee irraa adda bahuunis akkasuma. Muuxannoon namoota akkasii kan warra miidhama warra dirree waraanaa irratti hirmaaten adda hin jiru.
Dhukkubsattoonni qorannoo kanaaf filataman garuu kan qalbiin isaanii badaa cabde miti. Warreen amantiin jalaa hanqifame jiru, namooti jaalalleen isaan amanan isaan dhiisan jiru.
Namoonni miidhamasaanitti baruuf yaalan akkuma jiran, kaanimmoo ciraadhuma keeessaa bahuu hin dandeenye,'' jedhu Dr Biraanet.
Namoonni yeroo hunda kan itti himan garuu akka keessaa bahaniifi, sun garuu isaan hin gargaaru.
Namoonni kunneen yaadannoo miidhamaa sammuu isaanii keessa jiru irra deddeebisanii jiraatu.
Adeemsa wal'aansaa shan keessa erga darbaniin booda yaadannoo ganamuu/miidhamuu isaanii barreessan sagalee ol qabanii yoo dubbisan, akka asoosama nama gara biraa dubbisanitti itti dhagahame.
Kaanimmoo wal'aansuma yeroo tokkon haaragalfannaan itti dhagahameera.
''Akka wal'aansa kanaatti yaadannoo isa sirriitti fiduuf suuta suutaan isa durii irraanfanneetu, dhumarratti waan haaraa yaadachuu jalqabna.''
Hakiimichi wal'aansi kun waa tokko sababa gahaa malee sodaachuu/jibbuu, araadaa fi aarii yaaluu ooluu danda'a jedha.
Awustraaliyaan namni 'sperm' arjoome abbaa seera qabeessa daa'imaati jette